Google Primer: Baro Ganacsi Cusub iyo Xirfadaha Suuqgeynta Dijitaalka ah | Martech Zone
Milkiilayaasha meheradaha iyo kuwa wax iibiya intabadan wey ku badan yihiin markay tahay marketing digital. Waxaa jira maskax aan ku riixo dadka waawayn inay korsadaan markay ka fikirayaan iibka iyo suuqgeynta internetka:
Had iyo jeer way isbeddeleysaa - madal kastaa waxay ku socotaa isbeddel xoog leh hadda - sirdoonka macmalka ah, barashada mashiinka, ka shaqeynta luqadda dabiiciga ah, xaqiiqada dhabta ah, xaqiiqda isku dhafan, xogta weyn, xannibaadaha, botska, Internetka Waxyaabaha… yeeh. In kasta oo taasi u muuqato mid argagax leh, maskaxda ku hay intaas oo dhan oo waxtar u leh warshadeenna. Badbaadada macaamiisha iyo asturnaanta ayaa horumarin doonta, sidoo kale kanaalada iyo istiraatiijiyado aan geyn karno si aan u gaarno marka ay raadinayaan alaabteena iyo adeegyadeena.
Qaadashada hore waa faa'iido - in kasta oo xoogaa khatar ah, kanaallada suuqgeynta dhijitaalka ah ee cusub waxay bixiyaan fursad aad u fiican oo lagu qabsado dhagaystayaasha aysan tartamayaashaadu u adeegin. Khatarta, dabcan, ayaa ah in alaabada la xiri karo maadaama ay guul darreysatay ama la helay. Si kastaba ha noqotee, haddii aad saameyn ku yeelan karto dhagaystayaashaada cusub oo aad dib ugu celin karto bartaada halkaasoo aad ku qabsan karto emayl ama aad ku gelin karto olole kobcin ah, markaa waxaad arki doontaa xoogaa guul ah.
Samee waxa shaqeeya - ha ka raaligelin inaadan awoodin inaad wada sameyso. Waa dhif iyo naadir in aad heshid ganacsi ka faa'iideysta dhammaan dhexdhexaadiyaasha iyo kanaalada. Runtii waa wax aan macquul aheyn in la helo ganacsi dhammaantiisba bartay oo dhammaantood si wax ku ool ah u adeegsanaya. Hadaad natiijooyinka ku wadato emayl, isticmaal emaylka. Haddii aad ku wado natiijooyinka warbaahinta bulshada, isticmaal warbaahinta bulshada. Samee waxa shaqeynaya - ka dib tijaabi oo ku dar waxyaabo kale oo dhexdhexaad ah sida aad otomaatig u tahay oo aad u dhisto waxtarka gudaha.
Dadku waxay i weydiiyaan sidaan ula socdo… Ma qabo. Sida ugu dhakhsaha badan ee aan u isticmaalo macluumaadka oo aan wax u baro, naadiyo cusub ayaa soo baxa maalin kasta. Waa mid ka mid ah sababaha aan si xor ah ugu dhiirrigeliyo hoggaamiyeyaasha kale ee warshadaha teknoolojiyadda suuqgeynta. Isku soo wada duub boggagayaga, waxaadna weli uun baran doontaa qayb yar oo ka mid ah waxa ka dhacaya warshadeenna.
Xagee ka bilaabaa?
Taasi waa su’aasha milyan-doollar ee lala qabo beesheena. Halkee ayuu ka bilaabmaa? Hagaag, waa tan mid ka mid ah talo-bixinta adiga - Google Primer.
Ku saabsan Primer
App-ka Primer wuxuu bixiyaa casharo dhakhso ah, cabiran, casharro aan jargon lahayn oo ku saabsan mowduucyada ganacsiga iyo suuqgeynta Waxaa loogu talagalay milkiileyaasha ganacsiga waqtiga-ciriiriga ah iyo xirfadlayaal hammi sare leh oo doonaya inay helaan xirfado cusub oo ay ku sii tartamaan adduunkan casriga ah ee weligiis isbedelaya. Casharrada Primer-ka waa la daweynayaa oo ay abuureen koox yar oo ka tirsan Google. Google wuxuu iskaashi la sameeyay khubarada ugu sareysa warshadaha si ay ugu keenaan isticmaaleyaashayada mowduucyadii ugu dambeeyay uguna khuseeyay, talooyinka, istaraatiijiyadaha, iyo casharrada.
Ka raadi Primer xirfadaha aad rabto, la soco horumarkaaga intaad socoto, oo dhammaantood baro. Qaybaha muhiimka ah waxaa ka mid ah:
Maareynta Hay'adda - Soo hel qaababka loo dhisi karo xiriir shaqo oo caafimaad qaba hay'adahaaga.
Analytics - Qaado casharro ku saabsan metrik-yada dhijitaalka ah, Google Analytics, iyo waxyaabo kale oo badan.
Dhismaha Summada - Soo ogow sida loo doorto magac ganacsi oo adag, kobcinta aqoonsigaaga sumcadda, iyo inbadan.
Aragtida Ganacsiga - Ku bar baro dhagaystayaashaada casharro ku saabsan imtixaanka isticmaalaha, cilmi baarista, iyo fikradaha macaamiisha.
Maareynta Ganacsiga - Qaado casharro ku saabsan hoggaaminta, isu dheelitirka nolosha-shaqada, shaqaaleynta koox, iyo waxyaabo kale oo badan.
Qorshaynta ganacsiga - Baro sida loo bilaabo ganacsi oo u dejiso guusha.
Content Suuq - Hel casharro ku saabsan qorsheynta, abuurista, iyo wadaagista waxyaabaha ku qanciya.
Ka Qayb galka Macaamiisha - Baro sida loo abuuro sheekadaada ganacsi oo aad u hesho bartilmaameedkaaga.
Suuq Digital - Raadi sida loogu ganacsado meheraddaada khadka tooska ah.
Email Marketing - Raadi sida loo dhiso liistada emaylka, isticmaal otomaatiga emaylka, iska ilaali miirayaasha spam, iyo inbadan.
Suuq-mobile - Ka hel talooyin ku saabsan ka-qayb-galka bartilmaameedkaaga dhageystayaasha taleefannadooda gacanta.
iibinta - Soo qaado talooyin ku saabsan sameynta iibkaagii ugu horreeyay ama aad xitaa iibsato.
Warbaahinta bulshada - Baro sida loo abuuro xayeysiiska bulshada, ula shaqeynta kuwa saamaynta ku leh, iyo inbadan.
Bilowga - Baro wax ku saabsan jabsiga koritaanka, noocyada hore, isku soo ururinta, iyo tabaha kale ee bilowga ah.
Khibrada Isticmaalka - Baro wax ku saabsan ka caawinta dadka isticmaala inay sida ugu badan uga faa'iideystaan ​​shabakaddaada, dukaanka moobiilka, barnaamijyada, iyo wax badan.
Suuqgeynta Fiidiyowga - Baro sida loo abuuro fiidiyowyo toos ah oo toos ah, xayeysiis fiidiyow ah oo shaqeynaya, iyo inbadan.
website - Hel talo bixinno ku saabsan sameynta degel ganacsi oo macaamiisha u soo jeedinaya.
Bilaw maanta! Hadaad kucusubtahay ganacsiga ama suuqyaqaan khibrad uleh, dalabku wuxuu bixiyaa talo iyo jiheyn wacan.
Soo Degso Google Primer
Tags: hay'addamaamulka wakaaladatababarka wakaaladaAnalyticstababarka falanqayntadhismaha sumaddafikradaha ganacsigamaareynta ganacsigaqorsheynta ganacsigatababarka ganacsigaContent Suuqtababarka suuqgeynta waxyaabahatababarka maadadahawlgelinta macaamiishatababarka ka-qaybgalka macaamiishamarketing digitaltababarka suuq-geynta dijitaalka ahEducationEmail Marketingtababarka suuqgeynta emaylkawaxbarashadaapp mobilemarketing mobiletababarka suuq-geynta moobiilkaKordhinta Iibkatababarka iibkaiibintaMedia Social Suuqtababarka suuqgeynta warbaahinta bulshadatababarka baraha bulshadaxawaaladahaGOORMUUisticmaal tababar khibrad ahkhibrada isticmaalahasuuqgeynta fiidiyowgatababarka suuq-geynta fiidiyowgatababarka fiidiyahawebsitetababarka suuq-geynta websaydhka
Sida loo Hirgaliyo Suuq Xisaab Ku-saleysan (ABM)